अफलाईन हुनुहोस्, अनप्लग हुनुहोस्, कम्तिमा केही समयको लागि | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 15, 2010 मङ्गलबार, अप्रिल 1, 2014 स्टीव क्रेमर
यो स्टक फोटो होइन। होन्डुरसको समुद्री तटमा ह्यामॉकमा त्यो मेरो खुट्टा हो। कुनै सेल छैन, कुनै ल्यापटप छैन, कुनै समस्या छैन सोम।
म पहिलो अनलाइन भयो र मेरो पहिलो इ-मेल ठेगाना १ got 1995 early को शुरुमा प्राप्त भयो। ढिलो '95 I मा मैले सुरू गरें वेब डिजाइन व्यवसाय। मेरो आफ्नै कम्पनी हुनु भनेको अनलाईन हुनु र मेरो ग्राहकहरुका लागि सबै समयमा उपलब्ध हुनु हो। म सँधै प्लग हुन्थें। छुट्टीमा पनि म अहिले लिएर आउँदछु पुरानो एनईसी ल्यापटप। समय बित्दै जाँदा म विभिन्न स्टार्टअपमा सामेल भएँ। त्यसबेला पनि बिदामा जब यो अपेक्षा गरिएको थियो कि म कम्तीमा मेरो केही समय "जरुरी" इ-मेलहरू जाँच गर्न र महत्त्वपूर्ण बैठकहरू बोलाउन खर्च गर्दछु। र मैले गरे।
तर यो बितेको हप्ता मैले क्यारेबियन क्रूज लिएँ र केहि गरे जुन मैले १ 15 बर्षमा गरेको छैन। म पूरै ग्रिड बाहिर गए। कुनै ई-मेल छैन। कुनै सेल फोन छैन। ठ्याक्कै days दिन र १० घण्टाको लागि। यो पहिले अनौंठो थियो। तर समग्र यो महान थियो, यो स्वतन्त्र थियो। पेशागत मोर्चामा मैले सहकर्मीहरूबाट मद्दत गरेको थिए जुन आए जो कुनै जरुरी मामिलालाई कभर गरे। व्यक्तिगत मोर्चामा मैले प्रायः आईफनमा पुग्न पाएँ जुन मेरो जेबमा थिएन कि इन्स्ट्याट इन्टरनेट जानकारी पाउन मैले सोचे कि मलाई आवश्यक छ। मेरो टेक्नोलोजी टेथर त्यहाँ थिएन र केही समय पछि म यसको प्रयोग गरिनँ। यस हप्ताको सुरूमा म व्यापार सम्पर्कको साथ कुरा गरिरहेको थिएँ र मेरो unwided छुट्टीको उल्लेख गरें। उनले भनिन् कि उनीसँग कहिलेकाँही “डिटक्स” हुन्छ, जहाँ उनले "क्र्याकबेरी" मा सबै पनी जाँच गरिन्। उनले भनिन् कि यो महान थियो र म सहमत छु। यसलाई प्रयास गर्नुहोस्..अनप्लग..डेटोक्स .. वसन्तको आनन्द लिनुहोस्।
स्टीभले आफूलाई "सानो बिट कन्ट्री, थोरै रक-एन-रोल" दुबै टेकी र मार्केटरको रूपमा वर्णन गर्दछ। उनले १ 1995 XNUMX in मा WISH-TV फिर्ता इन्डीको पहिलो वेब डिजाइनर र सल्लाहकारहरूमध्ये एक हुन छोडे। बाटोमा उनले आईप्रोपर्टी.क., नरोरोलाइन, वनकोल इन्टरनेट सहित स्टार्टअपका लागि काम गरे। भोंटो र ChaCha जहाँ कर्मचारी #4थियो र हाल चाचाको अनलाइन विज्ञापनको निर्देशक हो।
अप्रिल 15, 2010 मा 8: 05 PM
बिदा मा बधाई छ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी समस्याहरूमा यति गहिरो गाड्छौं कि हामी काम गरिरहेका छौं कि हामी एक कदम पछाडि हट्दैनौं। कहिलेकाहीँ टाढाको दृश्यले चीजहरू धेरै स्पष्ट देखिन्छ! उत्कृष्ट फोटो!
अप्रिल 17, 2010 मा 10: 07 एएम
मलाई यो पोस्ट पढेर रमाइलो लाग्यो। मलाई साँच्चै लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो छुट्टीको आनन्द उठाउनुभयो। कम्प्युटरबाट टाढा, सबै समस्याहरूबाट टाढा। म कसरी चाँडै मेरो छुट्टी पाउन सक्छु। अहिलेको लागि, मैले अझै अर्को काम पूरा गर्न बाँकी छ।
साँच्चै महान फोटो!